▷ Kedu maka izu ọrụ ụbọchị anọ? - 【 Ntụnyere 】 2022
Kedu maka izu ọrụ ụbọchị anọ?
Ezinụlọ ị họọrọ
Amazon Prime Video (Video na-achọ); Zack Gottsagen, Ann Owens, Dakota Johnson (Ndị na-eme ihe nkiri); Tyler Nilson (Onye nduzi) - Tyler Nilson (Onye ode akwụkwọ) - Albert Berger (Onye mmepụta)
Taa, ọtụtụ n'ime anyị na-eche na izu ọrụ na-ewe ụbọchị ise bụ otú e si eme ya. Nke ahụ abụghị. Nke a ghọrọ naanị ọkọlọtọ na United States mgbe otu ndị ọrụ meriri Fair Labor Standards Act (FLSA) na 1938. Tupu mgbe ahụ, ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ awa 48, ụbọchị isii n'izu, ma nwee obi ụtọ inwe ya.
Anyị na-arụpụta obere ihe ugbu a? Anyị abụghị.
N'ezie, mgbe Henry Ford, n'ime mmadụ niile, webatara ụbọchị ise, awa 40 maka ndị ọrụ na Ford Motor Company, otu n'ime ihe mere o ji mee ya bụ n'ihi na o chere na ọ ga-abawanye mmepụta. O kwuru eziokwu; Ọ bụ ezie na oge ọrụ nke ndị ọrụ ebelatala, nrụpụta abawanyela.
Ngwa ngwa ngwa taa. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ anaghị arụ ọrụ na ahịrị mgbakọ ibe. Ndị ọrụ ụlọ nkwakọba ihe Amazon nwere ike na-arapara igbe na-akpụ akpụ ngwa ngwa o kwere mee, mana ọ bụghị otu a ka ọtụtụ n'ime anyị si enweta ego.
Kama, anyị na-anọdụ ala na ahụigodo ma jiri ozi rụọ ọrụ. Anyị na-eji ụbọchị anyị na-eme mkpọtụ site na nzukọ ruo n'izu na-arụ ọrụ anyị iji nweta nkwekọrịta. Ma, ọ bụrụ na ị dị ka m, mgbe ụfọdụ ọ na-adị gị ka ịdọpụ ntutu isi gị mgbe otu nnukwu nzukọ gasịrị.
Ọrịa ọjọọ ahụ emeela ka ịrụ ọrụ site n'ụlọ bụrụ ihe ọhụrụ. Onye ọ bụla nke na-eche n'ụzọ ọzọ agbagharala ụgbọ mmiri ahụ. Ọ na-emebi echiche na ọ na-ewe awa 9-5 "nkịtị" iji nweta ọrụ ahụ. Ndị mmadụ na-arụ ọrụ ugbu a mgbe ọ dabara ha ma ọ nweghị ọdịda nke nrụpụta.
Ụwa ọhụrụ ọrụ a ọ̀ chọrọ izu ọrụ awa 40? Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekwu mba. Ma kedu ihe? Maka ha, ụbọchị anọ, izu ọrụ awa 32 na-arụ ọrụ nke ọma.
Dị ka akwụkwọ akụkọ New York Times kọrọ, ụlọ ọrụ dị ka Shake Shack, Kickstarter, na Unilever's New Zealand unit akwagala n'izu ọrụ ụbọchị anọ na ihe niile dị mma. A na-arụ ọrụ ahụ, ndị ọrụ na-enwe obi ụtọ karịa mgbe ọ bụla, uru na-arị elu.
Ụlọ ọrụ teknụzụ na-abanyekwa n'ọrụ a. Amaara m, akụkọ stereotypical nke ụlọ ọrụ teknụzụ na-abụkarị maka ndị bi n'ọfịs, na-arụ ọrụ awa 80+ n'izu, na enweghị ndụ. Mgbe ahụ enwere Bolt, eCommerce unicorn.
Onye isi ala Bolt na onye nchoputa Ryan Breslow tweeted na nso nso a: “Bolt bụ ugbu a unicorn teknụzụ izizi na-agbanwe kpamkpam na izu ọrụ ụbọchị anọ. Ahụmahụ nke ọnwa 4 anyị egosila isi ihe mmụta ọ bụla: 3/Mbawanye nrụpụta, 1/Nkwekọrịta, na 2/Ọdịmma. "
Gịnị kpatara? Breslow gara n'ihu ikwu, sị: “Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enwe 'ihe ngosi egwuregwu'… ie: mmemme emere ka ọ 'dị mma' kama ibugharị agịga n'ezie. Nzukọ na-enweghị atụ, ihe ngosi na-agbagwoju anya, njakịrị mgbe niile. Nke kacha njọ! Anyị jụrụ ọrụ ihe nkiri na Bolt.
Kama, ọ tweeted, ọ bụghị maka "ọrụ dị ka." Anyị na-eche banyere naanị ihe dị mkpa: mmetụta nke "Ị kpaliri agịga n'izu a?" ""
Enweghị m ike ikwenye karịa. Ngwá ọrụ kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ. Ọnweghị ihe ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya na izu ọrụ awa 32, na ọtụtụ n'ime anyị nwere ike, wee gaa maka ya.
Ọ bụghị naanị nnukwu azụmahịa. Akwụkwọ akụkọ New York Times chọpụtakwara na ndị na-ere uwe ụmụaka n'ịntanetị bụ Primary ugbu a na-agbanwe n'ezie na izu ọrụ ụbọchị anọ. Ọnụ ego afọ ofufo nke ụlọ ọrụ ahụ agbadala ntakịrị na 7% n'ime afọ gara aga, ọbụlagodi dịka ndị ọrụ kwụsịrị ọrụ n'ebe ndị ọzọ na ọkwa ndekọ n'oge "Great Quit." Ebe ọtụtụ ndị mmadụ kwụsịrị ọrụ ha karịa mgbe ọ bụla - ihe ndekọ 4,5 nde ndị ọrụ America na Nọvemba - ihe ọ bụla na-eme ka ndị mmadụ nọrọ ebe ha nọ bụ ihe dị mma.
Nnyocha Gallup mere n'oge na-adịbeghị anya chọpụtakwara na "ịrụ ọrụ ụbọchị anọ nwere ọnụ ọgụgụ afọ ojuju na ọdịmma kachasị elu (63%), ma e jiri ya tụnyere ndị na-arụ ọrụ ise (57%) ma ọ bụ ụbọchị isii (56%). Ndị ọrụ nwere obi ụtọ bụ ndị ọrụ na-arụpụta ihe.
Gallup chọpụtakwara na "ndị ọrụ na-achọkwu mgbanwe na mgbanwe ọrụ na-ejikọta na ntinye aka dị elu nke ndị ọrụ. Mgbanwe ọrụ na-enye ndị ọrụ ohere imeziwanye ọdịmma ha n'ozuzu ha n'akụkụ ndị ọzọ mgbe ha na-egbo mkpa ọrụ ha. Ọ na-ebelata nchekasị site n'ikwe ka ndị mmadụ mepụta usoro nhazi bara uru maka ndụ ha. Nke a bụ kpọmkwem ihe mere na ịrị elu nke ọrụ site n'ụlọ.
Ugbu a onye ọ bụla nwere ike ime nke a? Ọ bụghị n'ezie. Enweghị m ike. Arụla m ọrụ awa iri ise na ise ruo ọtụtụ iri afọ. Abụ m onye nta akụkọ na-ejikọta ọrụ m na akụkọ. Akụkọ ahụ adịghịkwa akwụsị. Mana ọtụtụ n'ime anyị anaghị arụ ọrụ n'ebe ọrụ na-arụ ọrụ bụ omume ọma. Ị nwere ike ịchọpụta na ịlụ di na nwunye adịghị mma maka gị ma ọ bụ azụmahịa gị.
Nọdụ ala, lelee azụmahịa gị. Ị na-egbu oge na nzukọ na-adịghị agwụ agwụ? Ndị ọrụ gị hà na-arụ ọrụ ha n'ezie ka ọ bụ na ha na-etinye oge na-enweghị isi? Kedu ka awa ndị ahụ si eme ka akara ala gị dịkwuo mma?
Gwa ndị ọrụ gị okwu. Gbalịa mee ihe omume nke awa 32, ụbọchị anọ n'izu. Ama m na ọtụtụ n'ime unu ga-ahụ na nke a na-arụ ọrụ nke ọma. N'ezie.
Ya mere gụọ nke a:
Anyị amaworị ka Apple ga-esi eme nke ọma na-ejighị n'aka
Ihe Gen Z na Millennials chọrọ n'aka ndị ọrụ